Triamcinolone acetonide အမှုန့် (76-25-5) hplc≥98% ကိုဝယ်ပါ။ | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Triamcinolone acetonide အမှုန့် (76-25-5)
rating: SKU: 76-25-5. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Triamcinolone acetonide Powder (76-25-5) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
Triamcinolone acetonide အမှုန့် (76-25-5) ဗီဒီယို
Triamcinolone acetonide အမှုန့် (76-25-5) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Triamcinolone acetonide
CAS အမှတ်: 76-25-5
သိုလှောင်မှု: ထိန်းချုပ်ထားသောအခန်းအပူချိန်တွင်15˚-30˚C (59˚-86˚F) တွင်သိုလှောင်ထားပါ။
Triamcinolone acetonide အမှုန့် (76-25-5): Description:
Triamcinolone အက်တွန်နိုက်သည်ဒြပ်ပေါင်းဂလူးကော့ကိုရစ်တီဒိုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်သည့်သဘာဝ steroid ဟော်မုန်းများကိုတုပသည်။ Triamcinolone သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံမသုံးနိုင်သောကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်များကိုငြိမ်သက်စေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရောဂါပြီးသည့်အခါသင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီသည်။ သင့်ဆရာဝန်ကဤဆေးကိုဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဖြစ်သည့်နှင်းခူ၊ psoriasis၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Food and Drug Administration (FDA) မှပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးပမာဏနှင့်ခွန်အားသည်သင်သတ်မှတ်ထားသော triamcinolone အမျိုးအစားနှင့်သင်နေထိုင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Triamcinolone acetonide အမှုန့်သည် ၄ ​​င်း၏ acetate ပုံစံသည်အဖြူသို့မဟုတ်အဖြူကဲ့သို့သောပုံဆောင်ခဲအမှုန့်ဖြစ်ပုံရသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးခါးသောအရသာနှင့်အတူအနံ့မရှိ။ ၎င်းသည်ရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်ပါ။ အီသနောတွင်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်နိုင်ပြီးကလိုရိုဖိုတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
Grover DA, လီ T, Chong CCW (2008) ။ "ဆီးချိုရောဂါအတွက် macular ဖောများအတွက် Intravitreal Steroid တစ်မျိုး" ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ (1): CD005656 ။ Doi: 10.1002 / 14651858.CD005656.pub2 ။ PMC 3804331. PMID 18254088 ။
“ Nystatin နှင့် Triamcinolone (ခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်း)” ။ mayoclinic.org ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးနှင့်သုတေသနများအတွက် Mayo ဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ 18 မေလ 2016 ရယူရန်။
Gewaily: D, Muthuswamy K ကို, Greenberg PB (2015) ။ "အလယ်ပိုင်းလွှာသွေးကြော occlusion မှအလယ်တန်း macular ဖောများအတွက်လေ့လာရေးနှိုင်းယှဉ် Intravitreal steroids" ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗျာ9(9): CD007324 ။ Doi: 10.1002 / 14651858.CD007324.pub3 ။ PMC 4733851. PMID 26352007 ။
Ulipristal အမှုန့် (159811-51-5)
Flumethasone အမှုန့် (2135-17-3)